अलि बिस्तारै गर्नुन …..!( भिडियो सहित) – Enepali Samchar
March 19, 2021 March 19, 2021 adminLeaveaComment on अलि बिस्तारै गर्नुन …..!( भिडियो सहित)
E nepaaalisamchaar “काठमाडौ । श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा कोही तेस्रो ब्यक्ति आयो भने सम्बन्ध विग्रन्छ । तर तपाईले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कोही श्रीमानले पैसाको लागि श्रीमतीलाई अरुसंग सम्पर्क गर्न पठाउँछ ? यह काभ्रेमा त्यस्तै जोडी पक्राउ परेका छन् ।
श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा कोही तेस्रो ब्यक्ति आयो भने सम्बन्ध विग्रन्छ । तर तपाईले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कोही श्रीमानले पैसाको लागि श्रीमतीलाई अरुसंग सम्पर्क गर्न पठाउँछ ? यह काभ्रेमा त्यस्तै जोडी पक्राउ परेका छन् ।
Facebook Messenger र Instagram मा व्यापक समस्या यस्तो छ वास्तविक कारण